Eziokwu banyere kpakpando, ebe ị mụtara na ndụ gị agaghị abụ otu!
Ị chere na ị maara ihe niile gbasara kpakpando kachasị amasị gị, ihe niile na ọbụna karịa karịa ha? Ọfọn, nke ọma ...
Mana anyị ahụla 17 ruo mgbe a ma ama, ma ọ bụ eziokwu dị omimi na ihe dị ịtụnanya, nke ị gaghị agụ na akụkọ ndụ, ma eziokwu nke ndị ọkachamara ahụ kwadoro. N'okwu, kwadoro - na nkeji ole na ole ụwa gị agaghị abụ otu ihe ahụ ...
1. N'afọ 2005, Benedict Cumberbatch tinyere aka na mmepụta nke usoro isiokwu ahụ, ọtụtụ n'ime ha na-ese na South Africa. Ị gaghị ekwere, ma ọ bụ (ọ bụghị site na edemede!) Gburu 6 ndị agha bandits!
2. Mama Justin Timberlake bụ onye na-elekọta Ryan Gosling mgbe ha na-ese ihe na "The Mickey Mouse Club", n'ihi na nne na-eme ihe nkiri ahụ aghaghị ịnọ n'ụlọ na Canada ma nweta ego!
3. N'akụkụ, ị maara otú Ryan Gosling si tinye ntinye na "Dọkịta nke Ncheta"? Ọ na-achọpụta na onye nduzi chọrọ onye ọ bụla kama ịdị egwu, ọ bụghị ezigbo mma ma ọ dịghị mma!
4. Cheedị echiche, mana ọ bụ Santa Claus kacha mkpa ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-eme ihe nkiri na-eme ihe nkiri Disney, bụ Tim Allen na 1978, n'ọdụ ụgbọ elu dị na Michigan maka ịchekwa cocaine 700 grams!
5. Ma ugbu a n'ozuzu jidere - ezigbo aha Oprah Winfrey bụ n'ezie Orpa! Nke a bụ kpọmkwem ihe e dere na akwụkwọ ọmụmụ ya, lee ihe dị iche, onye na-ahụ maka TV anaghị ezo ya!
6. Ole ndị ga-eche na "ikpe ikpe" ga-emetụta ndụ nke onye na-egwu egwu na-arụ ọrụ bụ isi na usoro "Ọ dere igbu ọchụ"? Ọ na-egosi na Angela Lansbury maka nzọpụta ga-ebuga ezinụlọ ya na Ireland mgbe nwa ya nwanyị kpọtụụrụ "Family" nke Charles Manson na ọgwụ ọjọọ riri nwa ya nwoke!
7. Na ị maghị nke ọma - na usoro ọmụmụ nke onye na - eme ihe nkiri Sarah Jessica Parker, e nwere aha onye Esther Esther, bụ onye na - emepechabeghị anya maka ndị amoosu Salem, ma gbapụrụ n'osisi!
8. Onye na - eme egwuregwu bụ Robin Williams bụ nnukwu onye nkiri egwuregwu vidio ahụ bụ "Legends of Zelda", nke na - asọpụrụ ya ọbụna kpọọ nwa ya nwanyị!
9. Tupu ị ghọọ omee, Jason Statham 12 (!) Ọtụtụ afọ bụ otu n'ime ndị mba Britain maka ịgba mmiri!
10. Ntak emi nnyịn mîfiọkke ite ke edinen ke iso Tom Cruise ke iso ke iso?
11. Ma aha ya na di ya bu Gisele Bundchen - quarterback nke ndi Patriots Tom Brady amaghi ire strawberries. M na-eche ma ọ dị adịghị eche ya ma ọ bụ ka ọ nọgide na-akpali akpali?
12. Lee egwu, ọ na - apụta, mgbe omee ahụ bụ Woody Harrelson tụgharịrị afọ asaa, e gburu nna ya Charles. Ọfọn, afọ iri ka e mesịrị, popu ahụ na-ekwesịghị ntụkwasị obi kwughachiri ọrụ ya ma nata ndụ abụọ dị ndụ ozugbo!
13. Ọnwụ abụọ na akaụntụ nke nwunye Sarah Jessica Parker - onye na-eme ihe nkiri na onye nduzi bụ Matthew Broderick, onye na-anya ụgbọ ala mgbe ọ gbakwuru ọzọ ...
14. Ọ na-apụta na Tom Hanks na George Clooney na-emekọ ọ bụghị nanị ọrụ ọrụ na ọtụtụ nde mmadụ, kamakwa nna ochie - 16 Onye nduzi nke US President Abraham Lincoln!
15. Naanị ikwado ya - Mark Wahlberg nwere ọbọ atọ!
16. Harry Stiles nwere anọ!
17. Ọfọn, na anyị nwere mmasị na achicha - ị maara, gịnị bụ aha dị n'etiti omee Richard Gere? Tiffany! Ọ dị mma na ọ bụ ...
Ryan Gosling na Eva Mendes na ụmụaka maka oge mbụ na ogologo oge jidere na lenses nke paparazzi
George na Amal Clooney gara agbamakwụkwọ nke Megan Markle na Prince Harry
Onye na-ese ihe na-emepụta ihe odide ndị a ma ama na-eserese, ị gaghị ewepụkwa anya ha!
Kedu ihe bụ eziokwu kachasị gị?
Ejila ihere: foto kachasị mma nke kpakpando!
15 kpakpando ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ
Na onyinyo nke Duchess nke Cambridge: 10 ihe omimi gbasara Pippa Middleton
10 ama ama Cinderellas, emi ẹwetde mme n̄wed emi ẹnyenede nti owo
15 ndị ​​mmadụ hapụrụ site n'udo
Ụdị omenala nke ọmụmụ ụmụ eze
Ndi kpakpando kpakpando Hollywood ndi biara maka Oscars
Nke ahụ bụ otú ụmụ eze Disney ga-esi ele anya mgbe ha dị afọ
Nke a bụ ihe ihe nzuzo Victoria na-eri mgbe ngosi ahụ gasịrị
10 ụmụ nwoke a ma ama na akụkọ ihe nkiri nke sinima
30 obere foto nke kpakpando ndị ị hụtụbeghị
Ọnwụ ndị a na-enweghị atụ: ndị dike ndị na-adịghị na 2016
Esi ewepụ ihu na ihu?
Uwe ejiji ejiji 2013
Ego ole ka ụgwọ ahụhụ na-efu?
Ebube jaket 2014
Kate Middleton, ndị isi William na Harry gara Ụlọ Olympic Park
Osisi osikapa India - ihe bara uru
Nri ogwu - 7 ihe na-atọ ụtọ ụtọ ntụziaka nke ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ
Anya na-adabere maka ụmụaka
Na-emeju maka nwamba
Kedu ihe ski ahụ dị?
Nwunye Cristiano Ronaldo
Ogige Ụmụaka - Ụbịa-Winter 2015-2016
Kedu otu esi esi agwọ ọrịa ngwa ngwa n'ụlọ?
Okpokoro dikariri buckwheat
Valgus nrụrụ ụkwụ n'ime ụmụaka - ihe mbụ, ihe na-akpata na ọgwụgwọ
Efere na garlic na cheese
Diet Diet - Foods Permitted
Ụlọ okporo ígwè dị n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ
Kedu agba dị mma maka ime ụlọ?